“Kana Firimu Chairo Harisviki Apa”
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Baoule Basque Batak (Toba) Bislama Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Croatian Czech Danish Dutch Estonian Fijian Finnish Fon French Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Lingala Lithuanian Malay Malayalam Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Telugu Thai Turkish Ukrainian Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa “Kana Firimu Chairo Harisviki Apa”
Gore rega rega, Zvapupu zvaJehovha zvinobudisa mavhidhiyo pamagungano avo. Akawanda acho anenge ari muChirungu. Saka vamwe vanhu vakawanda vanopinda magungano aya mumazana emitauro isiri Chirungu vanozoanzwisisa sei? Mumitauro yakawanda, panoiswa mashoko emutauro wacho. Vanhu vanoona mavhidhiyo aya vanonzwa sei?
Vanhu Vanonzwa Sei Nemavhidhiyo Akarekodhwa
Chimbonzwa zvakataurwa nevamwe vasiri Zvapupu vakapinda magungano muMexico uye muCentral America:
“Ndakanzwa sekuti ndaitovamowo mufirimu racho. Rakanyatsondibaya mwoyo.”— Veracruz, akapinda gungano remutauro wePopoluca, kuMexico.
“Ndakanzwa sekuti ndakanga nditori kumusha ndichitaura neshamwari yangu. Kana firimu chairo harisviki apa nekuti ndainzwisisa zvese.”​— NuevoLeón, akapinda gungano remutauro weNahuatl, kuMexico.
“Pandakaona mavhidhiyo aya mumutauro wangu, ndakanzwa sekuti vanhu vaivamo vaitotaura neni.”—Tabasco, akapinda gungano remutauro weChol, kuMexico.
“Sangano iri rinokoshesa chaizvo kubatsira vanhu mumutauro wavo. Hakuna sangano rakadai!”— Sololá, akapinda gungano remutauro weCakchiquel, kuGuatemala.
Sezvo Zvapupu zvaJehovha zvisingaiti basa iri nevanhu vakatoridzidzira uye dzimwe nguva vachitorekodha munzvimbo dzakasaririra, sei zvinhu zvavanorekodha zvichizova zvemhando yepamusoro?
Mugore richangobva kupfuura, bazi rekuCentral America reZvapupu zvaJehovha rakatungamirira kurekodhwa kwemavhidhiyo epagungano muchiSpanish nemimwe mitauro midiki 38. Vanhu 2 500 vakazvipira kuita basa iri. Vanhu vairekodha uye mapoka evashanduri vakarekodha pahofisi yebazi, pamahofisi eshanduro asiri pabazi, uye pane dzimwe nzvimbo vachishandisa mastudio anoshandiswa kwenguva pfupi. Mapoka acho evashanduri akarekodha panzvimbo dzinopfuura 20 muBelize, Guatemala, Honduras, Mexico, uye Panama.
Kurekodha kuhofisi yebazi yekuCentral America
Zvaitoda kushanda nesimba kuti pagadzirwe mastudio aya. Nzvimbo idzi dzakagadzirwa nezvinhu zvaiwanika nyore zvakadai semagumbeze uye mamatiresi.
Vamwe vanhu vakazorekodhwa vacho vaisava nemari yakawanda zvekuti vaitozvipira chaizvo kuti vasvike kwaiva nemastudio. Vamwe vavo vaitofamba kwemaawa 14! Mumwe musi vamwe baba nemwanakomana wavo vakafamba kwemaawa 8 kuti vasvike kwaiva nestudio.
Naomi akakura achibatsira mhuri yake kugadzira mastudio anoshandiswa kwenguva pfupi. Anoyeuka kuti: “Taitarisira chaizvo vhiki rakwairekodhwa. Baba vangu vaishanda nesimba chaizvo kuti varonge zvinhu. Dzimwe nguva amai vanhu vaibikira vanhu vanoda kusvika 30.” Iye zvino Naomi ava kuzvipira kushanda pahofisi yeshanduro kuMexico. Anoti: “Ndinofara chaizvo kuti ndiri kubatsira vanhu kuti vanzwe mashoko eBhaibheri mumutauro wavo. Hakuna basa rinogutsa kupfuura basa iri randiri kuita.”
Magungano eZvapupu zvaJehovha anoitwa gore negore munyika yese uye anopindwa nechero munhu anoda. Enda pakanzi MAGUNGANO kuti uwane mamwe mashoko.
Makatuni Anonyanya Kufarirwa Nevana